I-Semalt ichaza ukuba kutheni iMozenda ithathwa njengokuba yinto enye yezinto eziphambili zoLwazi lokuCoca
Ukuchithwa kwedatha yinkqubo yokuqokelela idatha kwi-domain ethile ukuyihlela amafomathi angahlawulelwayo njenge-XML, i-CSV, okanye i-TSV. Le nkqubo ihluke kwi-extraction yedatha njengoko ukukhutshwa ngokuqhelekileyo kwenziwa ngokuqokelela idatha kwiindawo ezininzi.
Imfuno ye iinkonzo zokurhweba zanda ngokukhawuleza ngenxa yeenzuzo zayo ezininzi. Yingakho ezininzi izixhobo ziye zaphuhliswa ukuze zithole nayiphi na ulwazi kwiwebhu. Ngelishwa, ezininzi zezixhobo azigqibekanga kwaye zininzi zokungaphumeleli. Nangona kunjalo, kukho isixhobo esinomgangatho ophezulu, kwaye yiMoenda.
Iinzuzo zokurhweba idatha
I-Mozenda inokuqokelela ulwazi loqhagamshelwano lwemibutho kunye nabantu. Ukuchonga ulwazi loqhagamshelwano kuyimfuneko ekuthengiseni intengiso kunye nababoneleli ngeenkonzo zokuthengisa emhlabeni wonke. Ngokuphuhlisa ubuchwephesha bewebhu ubuchwephesha, kuye kwaba lula kakhulu ukukhangela abantu kunye nenhlangano ukubonelela ngeenkonzo kunye nemikhiqizo yakho.
Ukufikelela okulula kunaluphi na ulwazi loqhagamshelwano kuye kwenza kube lula ukuqokelela uluhlu lweposi, uludwe lwe-imeyile, kunye neenombolo zeefowuni. Ukongezelela kwintlawulo ekhankanywe ngasentla, kukho ezinye izizathu zokwenza ulwazi rhoqo:
1. Uphando loPhuphiswano: Iinkampani zikhangela idatha ngezizathu ezahlukeneyo zokukhuphisana. Ngokomzekelo, iinkampani zifuna ukwazi amaxabiso abo abakhuphisana nabo banikezela ngemveliso ethile kunye neenkonzo.
2. I-Geotargeting kunye nokuqokelela: Idatha ichongiwe ukuchaneka okufanelekileyo. Inceda iinkampani ukuba ziqhube iikhankaso zentengiso ezisekelwe kwendawo kwaye zandise ukuphumelela kwemigudu yabo yokuthengisa. Ngokomzekelo, inkampani eqhuba i-spa e-Dayton, eOhio kufuneka ithumele kuphela imilayezo yokuthengisa kubantu baseSukuton. Ukuthumela kwabo abahlali baseCincinnati abayi kusebenza kakuhle kuba akunakwenzeka ukuba nabani na oya kuhamba ngokukhawuleza ukufumana iinkonzo ze-spa.
3. Amaphulo okuthengisa: Njengoko kuchazwe ngasentla, udinga ukungena kwiinkcukacha zokwakha i-database yabameli abajoliswe kuyo.
4. Ukudala izikhokelo: Ngokomzekelo, ukuba inkampani kufuneka isebenzise iinkonzo zegqwetha, kufuneka lijonge iinkcukacha zamagosa ukuba zithathe iifowuni zabameli abathile ezisekelwe kwidolophu efanayo.
5. Uvavanyo lwabantu ngabanye kunye nemibutho yoshishino: Xa ufuna umlingane webhishini okanye umnikezeli wesevisi, ukukhutshwa kwedatha kunceda inkampani ihlole abaxhamli bayo. Ukuba unokufumana ulwazi malunga nenkampani okanye umntu, ngoko unokuyivavanya ngokungabikho.
i-software ye-Mozenda inokukhupha idatha oyifunayo ngexesha okanye ngokufunwa. Yenzelwe ukwenza abasebenzisi bafunde ukukhwabanisa kwewebhu ngokukhawuleza. I-Mozenda isebenzisa isicatshulwa ukunikezela iteknoloji eyenza ukuba ifanise umsebenzisi womntu wangempela.
Izibonelelo zokulinganisa umsebenzisi zilandelayo:
Iyakwazi ukuhamba ngokulula kumaphepha ewebhu enzulu
Ithwala kwaye ihamba ngeendlela ezifana nesiphequluli
Ngaphandle kokukwazi ukulingisa abasebenzisi, iMozenda ixhaswa yinkxaso enkulu ye-tech / 24, kwaye iphakheji yayo ihamba namavidiyo amfutshane okufundisa abasebenzisi ukufunda indlela yokusebenzisa kakuhle isixhobo. Iividiyo ezifutshane ezimfutshane zezifundo zilandelayo:
Indlela yokubamba itekisi. Oku kuthatha imizuzwana engama-43
Indlela yokulayisha iphepha elilandelayo lemiphumo. Kuthatha umzuzu kunye nemizuzwana engama-58
Indlela yokucwangcisa inkqubo yokuqhuba rhoqo. Ubude beli ngcaciso emfutshane kunye nemizuzwana engu-8
Indlela yokudibanisa idatha kwiinkalo ezimbini. Kuthatha umzuzu omnye kunye nemizuzwana engama-16
Ekugqibeleni, nangona iMozenda inezixhobo ezininzi, isizathu esibaluleke kakhulu kufuneka uzame ukukwazi ukukhangela iiwebhsayithi ezinamandla Source .